Faalo:Wax walba oo dhacaya waxa ay na gelinayaan shaki wey oo saamyn kuleh Mustaqbalka & jiritaan umadda soomaaliyeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
WAXWALBA OO DHACAYA WAXA AY NA GELINAYAAN SHAKI WEYN OO SAAMEYN KULEH MUSTAQBALKA IYO JIRIRAANKA UMADDA SOOMAALIYEED.
Dabayaaqada Bishii lasoo dhaafay iyo tan aan ku jiirno ee march waxa dhacay dhacdooyinka midba midka kale kasii daranyahay, waana wax dhamaann shaki Abuuray haddii maskaxda caadiga ah loo bandhigo.
Halkaan waxaa ku xusan 18 dhacdo oo midwalba shaki gelinaaya sida ay u dhacayaan, iyo cidda kadanbeysa waxa dhacaya, taasoo shaki gelineysa madaxbanaanideenna iyo ciddaa dabandaabyada noo maleegeysa.
1-bishii February ee sanadkaan Waxaa soo ifbaxay warar sheegaya in madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaare kheyre uu soo kala dhax-galay khilaaf, kaasoo aan banaanka usoo bixin laakiin gaaray sida la sheegay ilaa heer uu madaxweynuhu dhaho raiisul wasaarihiisa is casil si sharaf leh.
2-28kii February waxaa safar u baxay raisul wasaraha dalka, waxaa uuna gaaray dadka isutaga imaraadka carabta, safarkaas lama sheegin ujeedadiisa iyo waxa looga wada hadlayay, wixii kasoo baxayna saxafadda lalama wadaagin.
3-1dii march Raiisul wasaare kheyre oo joogay Dubai ayaa waxaa heshiis 3 geesood ah ku kala saxiixday imaaraadka, DP-world, Ethiopia iyo soomaaliland, kaasoo qeexayay sida loo kala qeybsanaayo dekada berbera dhaqaalaheeda.
4-2dii march R.kheyre ayaa dalka dib ugu soo laabtay waxaa uuna sheegay in ay kasoo horjeedaan heshiiska lagu kala saxiixday Dubai oo uu asagu joogay, sidoo kale waxaa uu sheegay in xukuumadiisu kasoo horjeedo, laakiin ogaw reisul wasaaruhu intii uu dubai joogay ma uusan kala hadlin imaraadka, heshiiska iyo ujeedadiisa, iyo in aan lagala tashan asigoo ah reysul wasaarihii dalka.
•Su’aashu ugu weyn ee dadku isweeydiinayaan ayaa ah maxaa isku soo beegay safarka kheyre dubia iyo heshiiska DP-world….?
5- Maalmihii lasoo dhaafay waxaa xamar kajiray warar sheegeya in raisul wasaraha uu lug kulahaa heshiiskaan, kadibna waxaa la sheegay in mooshin laga geyn doono kheyre asiga iyo xukuumaddiisa.
6-Madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa usoo jawaabay 8dii bishaan march raisul wasaare kheyre, waxa uuna sheegay in aan xukuumadda soomaaliya aan lagala tashanayn arimaha soomaaliland, iyo heshiiska dekadda berbera ee Dp-world la sheegay in ay dayactir kusameyn doonto.
7-Waxaa 9ka bishaan march hadlay agaasimaha shirkada DP-world, asigoona sheegay in aysan xukuumadda soomaaliya ka talin Soomaaliland, waxaa uuna intaa ku daray in aysan quseyn arimaha soomaaliland, asigoo sheegay in soomaaliland tahay dal madax banaan, taasoo jirta xukuumadda soomaaliya ma aysan cadeyn mowqifkeeda ku aadan dowladda isutagga imaraadka carabta iyo faragelinteeda ku aadan soomaaliya.
8- Maalintii sabtida ee 10ka bishaan march waxaa dib loo furay shirka golaha shacabka ee soomaaliya, madaxweyne farmaajo oo ka hor hadlaayay baarlamaanka muusan cadeyn go’aankiisa ku aadan shirkadda DP-world, iyo dowladda imaraadka carabta.
9-12kii march/ maalintii isniinta waxay baarlamaanku waxba kama jiraan ka dhigeen heshiiskii 3geesoodka ahaa ee DP-world, Ethiopia, iyo soomaaliland. Ayagoo ku sheegay mid baadil ah, kana hor imaanaya xuriyadda iyo madaxbanaanidda umadda soomaaliyeed.
10-13kii march waxaa qaraarkii baarlamanka la hor geeyay golaha senedka, go’aan cadna weli kama ay qaadan oo waa lagu kala qeybsamay.
11-14kii march ayaa markale la hor dhigay senedka welina sidii ayaa loogu qeybsamay.
•Sababtu maxay tahay…?
Illeen waxaa laga hadlayaa waa arin masiiri ah oo dalka iyo madaxbananidiisa quseysa eh..!!!
12-13kii march waxaa diyaarad khaas ah loosoo diray madaxweynaha soomaaliland muusa biixi cabdi xelli waqti galab ah, waxa uuna ka degay dubai.
Lama oga waxa halkaas looga hadli doono.
13-14 march subax arbaco ah waxaa mooshin xilka looga qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed cismaan jowhari saxiixay in ka badan 100 xildhibaan, sida lasheegayna waxaa loo gudbiyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee dalka mr MUUDEEY, Wuuna qabtay mooshinkaas.
14-Waxaa lasheegayaa in uu mooshinkaani yahay mid lagu khal-khal helinaayo mooshin xilka looga qaadayo raisul wasaare kheyre.
15-Sidoo kale waxaa la sheegayaa in madaxweynaha jamhuuriyada uu safar ku aadi doono dalka Qatar, halkaas oo la sheegay in uu ku suganyahay talihii ciidamada xoogga mr gorad.
16-Waxaa la sheegayaa in dowladda Qatar ay madaxweynaha ka codsan doonto saldhig military oo ay soomaaliya ka sameysan doonto.
17- waxaa sidoo kale halkaas imaan doona madaxweynaha dalka turkey ga Erdogan.
18-Waxaa halkaas imaan doonaa wasiirka arinaha dibadda Russia zarky lavrov, lama oga waxaa ay ka hadli doonaan.
W/Q: SAYID-ALI MOHAMED MO’ALLIM ALI.